‘Handany vola be dia be ny fividianana sakafo ampy hihinanan’ny tsirairay anjara kely avy’, hoy ny navalin’i Filipo. Nandray fitenenana i Andrea: ‘Ity zazalahy ity, izay mitondra ny sakafontsika, dia manana mofo dimy sy hazandrano roa. Nefa tsy ho ampy akory an’ireto olona rehetra ireto izany.’
Izao dia nampandehanin’i Jesosy an-tsambokely ny mpianany mba ho erỳ andafin’ny ranomasin’i Galilia. Nandritra ny alina dia nisy tafiodrivotra lehibe ary nahilangilan’ny onja be ihany ilay sambokely. Natahotra aoka izany ny mpianatra. Avy eo, tamin’ny misasakalina, dia nahita olona iray nandeha nanatona azy ireo teny ambony rano izy. Niantsoantso izy ireo noho ny tahotra, satria tsy fantany izay nojereny.
Tatỳ aoriana, i Jesosy dia namahana indray olona an’arivony maro. Tamin’izay dia mofo fito sy hazandrano madinika vitsivitsy no nanaovany izany. Ary dia nisy betsaka ho an’ny rehetra indray. Moa ve tsy mahatalanjona ny fomba nikarakaran’i Jesosy ny olona? Rehefa hanapaka amin’ny maha mpanjakan’Andriamanitra izy dia tsy hanahy ny amin’inona na inona intsony isika!
Hizara Hizara Namahana Olona Maro i Jesosy
my tant. 93